राष्ट्रसेवक कर्मचारी समाज नुवाकोटद्धारा सुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना
काठमाण्डौं । असोज २६ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी समाज नुवाकोटद्धारा बडा दशैं, दिपावली, छठ, नेपाल संवत लगायतका चाडपर्वहरुको अवसरमा सुभकामना आदनप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरीएको छ ।
काठमाण्डौंको बसुन्धरा स्थीत दियालो फुडल्याण्डमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पुर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत, पुर्व मन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी, नेकपाका नेता गणेश पण्डीत, नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति एवं पुर्व सभासद जगदिश्वर नरसिंह केसी, राप्रपाका नेता झनक प्याकुरेल, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिब रुद्रसिंह तामाङ, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिब नवराज ढकाल,लगायत बिभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु, नुवाकोटबाट निजामती क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी समाज नुवाकोटका सहसचिब केशर बहादुर पण्डीतले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा भाषणको कार्यक्रम नराखी समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले उपस्थीत सबै महानुभाबहरुलाई सुभकामना दिएर चियापानका निम्ती आमन्त्रण गर्नुभएको थियो ।